Rutnin Hospitalရဲ့ သမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အကောင်းဆုံး ရတ်တနင်မျက်စိအထူးကုဆေးရုံကြီး မျက်စိကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမှာ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ပထမဦးဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေ ပေးနေတဲ့ဆေးရုံ ကြီးဖြစ်ပါတယ်။
မျက်စိကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု နဲ့ ပတ်သက်လို့ အကောင်းဆုံးသောဆရာဝန်တွေ သူနာပြုတွေကိုအဆင့်မြင့် သင်တန်းတွေ အဆင့်ဆင့်ပေးပြီးကြိုးပမ်းတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ဆေးရုံကြီးဖြစ်ပါတယ်။ မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကောင်းများစွာ ရှိတဲ့ ဆေးရုံကြီး အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံထားရတယ်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အကောင်းဆုံး ရတ်တနင်မျက်စိအထူးကုဆေးရုံကြီး 1964 ခုနှစ်ကမျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အူထိုင်းရတ်သနင် (Dr U Thai Rutnin) မှ တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အူထိုင်းရတ်သနင် သည် Ramathibodi Hospital ဆေးရုံကိုအုတ်မြစ် ချခဲ့သူဖြစ်တဲ့အပြင် မျက်စိအထူးကုဌာနမှာလဲ အကြီးအကဲတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ဆရာဝန်ကြီးဟာ မျက်စိအမြင်လွှာရဲ့အတွင်းပိုင်းသွင်ပြင်လက္ခဏာတွေ(Peripheral Retina)ကိုသုတေ တနပြုခဲ့တဲ့ သုတေသီတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီစာတမ်းဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိမျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများအားထားရာ စံပြုထိုက်ရာ အခြေခံစံအဖြစ် အသုံးပြုသည့်အခြေခံမျက်စိအထူးကုစာတမ်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံးသောကုသမှုတွေဖြစ်လာဖို့နှစ်ပေါင်း (၅၈)နှစ်ကျော်မနားမနေကြိုးစားအားထုတ် တည်ထောင်ထားတဲ့ဆေးရုံကြီးဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်း၊ ကနေဒါ၊ အမေရိကန်မှ မျက်စိအထုးကုဆရာဝန်များနဲ့အတူ မျက်စိရောဂါနယ်ပယ်တွင် ကျွမ်းကျင်ပြီး အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဆရာဝန်နဲ့ သူနာပြုပေါင်း (၃၉) ယောက်ကျော်ရှိပါတယ်။
ကုသမှု အပိုင်းမှာတော့အပြည့်အဝကိုယုံကြည်မှုထားလိုက်ပါ...ဘာလို့လဲဆိုတော့ နည်းပညာအသစ်တွေနဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဆင့်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ခွဲစိတ်ခန်း (၃) ခန်းနဲ့ ကုသမှုတွေ ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်
ဒါတင်သာမကပဲ...ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးရန် မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်များနဲ့ အနီးကပ်စောင့်ရှောက်ပေးရုံ သာမက မျက်စိလူနာတွေအတွက် နောက်ပေါ်နည်းပညာတွေကိုပါ ပေါင်းစပ်ပြီး ကုသပေးနေပါပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသော ရတ်သနင်မျက်စိအထူးကုဆေးရုံကြီးတွင် ပြင်ပမျက်စိလူနာဌာန၊ အတွင်းလူနာခန်းများ၊ နေ့ချင်းပြီး ခွဲစိတ်မှုများ၊ ဆေးထိုးဌာန၊ ခွဲစိတ်ခန်းများ၊ အထူးစမ်းသပ်စစ်ဆေးခန်းများ၊ လေဆာစင်တာ၊ ကလေးမျက်စိအထူးကုစင်တာ၊ ရတ်သနင် ဂင်ဘဲလ် လေဆာစင်တာ စသည်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျှက်ရှိပါသည်။
ရတ်သနင် မျက်စိအထူးကုဆေးရုံကြီးမှာ ဘယ်လိုမျိုးကုသမှုတွေပေးနေလဲ??
မျက်စိရောဂါနဲ့ပတ်သတ်ပြီး နောက်ထပ်ဘာတွေ အထူးစစ်ပေးသေးလဲ?
မျက်လုံးအရှေ့ပိုင်းရှိ မျက်ကြည်လွှာ၊ အိုင်းလ်ရစ် နှင့် သူငယ်အိမ် စတာတွေကိုစစ်ဆေးပေးခြင်း
မျက်လုံးအနောက်ပိုင်းရှိ အမြင်လွှာ၊ မျက်ကြောလွှာအရည်များနှင့် အမြင်အာရုံကြောတွေကို စစ်ဆေးပေးခြင်း တို့ကိုပြုလုပ်ပေးနေပါပြီ။
မျက်မှန် နှင့် မျက်ကပ်မှန်ဆိုင်ရာဆေးခန်းများ
ရတ်သနင် ဂင်ဘဲလ် လေဆာစင်တာ
အရောင်များခွဲခြားနိုင်မှု (Color Blindness) ရှိ/မရှိ စမ်းသပ်ပေးခြင်း
မျက်ကြည်လွှာ ဆဲလ် အရေအတွက် စစ်ဆေးခြင်း
မြင်ကွင်းကျယ်အရအမြင်အာရုံ ကြောစကမ်ရိုက်ခြင်း (Optos)
ရတ်သနင်မျက်စိအထူးကုဆေးရုံကြီးအား အဆောက်အအုံ အတွင်းအပြင်နေရာများအား မှန်များဖြင့် အစားထိုး ပြင်ဆင်ထားရှိ ပြီး အလင်းရောင်ပိုမိုဝင်ရောက်စေရန် တည်ဆောက်ထားပါသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ဆေးရုံအဆောက်အအုံအတွင်း နွေးထွေးမှု ပိုမိုရရှိစေပြီး လူနာများအားသက်တောင့်သက်သာ ရှိစေပါသည်။
လူနာစမ်းသပ်ခန်းများကိုလည်း နောက်ဆုံးပေါ်ဆော့ဝဲလ်များအား ထည့်သွင်းထားခြင်းဖြင့် ဆရာဝန်နှင့်လူနာများအကြား ရောဂါအကြောင်းရှင်းလင်းရာတွင် ပိုမိုထိရောက်လွယ်ကူစေပါသည်။ အမြင်အာရုံများကြည်လင်စေခြင်း၊ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုး တက်အောင်ကြိုးစားထားခြင်းတို့ကြောင့် မျက်စိကုသမှုများကို အထိရောက်ဆုံးကုသမှုများပေးနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။